Tag: azo vakiana | Martech Zone
Tag: azo vakiana
Alakamisy, Jolay 17, 2008 Friday, May 3, 2013 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mamaky tranokala amin'ny heviny mahazatra. Ny olona dia mamaky lahatsoratra avy any ambony ka hatrany ambany ary mahazo lohateny, bala, sary, teny lakile ary andian-teny izay tadiaviny. Raha te hanatsara ny fomba lanin'ny mpamaky ny atiny ianao, dia misy fomba fanatsarana ny fisehonao. Asio soratra mainty eo ambadika fotsy. Mety miloko ny lokony malefaka hafa, fa ny mifanohitra kosa no lakileny, ary maizina kokoa ny endritsoratra noho ny ao aoriana. Manandrama lehibe kokoa,